'सहकारीले सदस्यको हरेक समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ' - सहकारीखबर
'सहकारीले सदस्यको हरेक समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ'
Share : 2,211
शिव भण्डारी धादिङका किसान आन्दोलनका अगुवामध्येका एक हुन् । कृषिको व्यवसायीकरणलाई मुलमन्त्र बनाएर धादिङका साना किसानहरुको स्तरवृद्धि गर्न भण्डारीले ठूलो योगदान पुर्याएका छन् । भण्डारी हाल साना किसान कृषि सहकारी संघ धादिङका अध्यक्ष हुन् । २०५२ सालमा समुह नं. २१ मा समुह सदस्य भएर साना किसानहरुलाई संगठीत पार्दै उनी ४ कार्यकाल साना किसान सहकारी संस्था बैरेनीको अध्यक्ष, २ कार्यकाल जिल्ला संघ धादिङको सदस्य, १ कार्यकाल उपाध्यक्ष र २ कार्यकाल अध्यक्ष भएर कार्य गरिसकेका छन् । देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई हिस्सा कृषि क्षेत्रले नै ओगटेको छ । यसै सन्दर्भमा प्रस्तुत छ कृषिको व्यवसायीकरण लाग्नुपर्छ भन्ने योजनाकार एवं साना किसानका अगुवा शिव भण्डारीसँग सहकारीखबरका लागि कार्यकारी सम्पादक काजी श्रेष्ठले गरेको कुराकानी ।
सर्वप्रथम साना किसान कृषि सहकारी संस्था बैरेनीको परिचय दिनुस् न ?
साना किसान कृषि सहकारी संस्था बैरेनी २०५३ साल भाद्र १९ मा डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाण्डौमा दर्ता भयो र अहिले हामी साँढे ४ करोडको कारोबार गर्दै आएको संस्था हो । हामीसँग ७ सय भन्दा बढि सदस्यहरु छन् । बिशेषगरि अहिले हामीले बैरेनी गाउँ विकास समितिमानै कार्य क्षेत्र बनाएर काम गरिरहेका छौँ । अहिले हामीले बैरेनी वडा नं ८ गल्छी भन्दा माथि ब्लग बनाएर यूनाईटेड मिसन टू नेपाल धादिङको सहयोगमा अर्गानिक खेती गर्न लागिरहेका छौं । साथै, त्यहाँ ८–९ वटा प्याकेजमा बाख्रापालन सम्बन्धि ट्रेनिङ चलाएर बाख्र्रापालन गरिरहेका छौं । च्याउ खेति सम्बन्धि तालिम दिएर कृषकहरुले च्याउ खेती गरिरहेका छन् । संस्थाको आफ्नै भवन छ । संस्थामा ५ देखी ११ जनाको १५२ वटा समुह छ ।
अहिले के समस्या देखिएको छ भने किसानले उत्पादन गरेको तरकारीले बजार नपाउने र बजार सम्म पहुँच नभएका किसानहरु पनि छन् तिनिहरुको लागी कृषि सहकारी संस्थाले के सहयोग गदै आएको छ ?
बजारीकरणको हिसाबले यो संस्था आफैले अर्गानिक तरकारीहरु बजारसम्म पुयाउने भनेर बैरेनी बजारमा एउटा अर्गानिक पसल निर्माण गरि सुरु गर्न लागेका थियौ । तर अर्गानिक तरकारी १/२ प्रकारको मात्र उत्पादन भई बजारमा आउने र बजारमा धेरै प्रकारका तरकारी चाहिने भएकाले यसमा हामी सफल हुन सकेनौ । हामी जिल्ला संघको तर्फबाट र यू एम एन धादिङको पहलमा विभिन्न ठाउँमा साना किसान सहकारी संस्थाको मार्फत तरकारी संकलन केन्द्र खोल्दै छौ । धादिङको विभिन्न ठाउँ सलाङ, भुमेस्थान, महादेवेशी, धार्के जस्ता ठाउँमा साना किसान सहकारी संस्था मार्फत तरकारी संकलन केन्द्र खोल्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागी रासायनिक मल बिउ, बिजन, किटनाशक औषधि उपलब्ध गराउने काम गर्यौं । किसानहरुले उत्पादन गरेको तरकारी पनि साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले नै बिक्रि गर्ने व्यबस्था गरिरहेका छौँ । विशेषत साना किसान सहकारी संस्था बैरेनीले नै त्यो सुरुवात ग¥यो तर पूर्णरुपमा भने सफल हुन सकिरहेका छैनौं ।
अहिले जिल्लामा १९२ वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था छन् । साना किसान कृषि सहकारी संघको मोडलमा चाहीँ ४० आवद्ध भईसकेका छन् । साना किसान कृषि सहकारी संघ धादिङमा १ गाउँ विकास समितिमा १ साना किसान कृषि सहकारी संस्था बनाउने योजना थियो । अहिले ४६ वटा गाविस र एक नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा गरि ५० वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था पुगिसकेको छ ।
देशकै परिवेशमा सहकारी संस्था हेर्दा ३२ हजार भन्दा माथि दर्ता भईसकेका छन् । र धादिङकै परिवेशमा हेर्दा पनि ४२० वटा सहकारीहरु दर्ता भईसकेका छन् । धादिङमा रहेका कृषि सहकारी संस्था पनि १८० भन्दा माथि रहेका छन् । स्वतसिद्ध रुपमा यी साना किसान सहकारीको छाता संगठन धादिङ नै हुनुपर्ने हो । धादिङ जिल्लामा साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको जन्म चाहीँ २०३२ सालमा भयो । सर्वप्रथम साना किसानले गरिबी निवारणका लागी पहल ग¥यो । धादिङमा रहेको सबै साना किसान कृषि सहकारी संस्थाको छाता संगठनको रुपमा धादिङ नै रहनु पर्ने हो । अर्को कुरा यि सब संस्थालाई समेट्नुपर्ने र समेटिरहेको हुनाले ५० वटा साना किसान कृषि मोडलका सहकारी हुन् भने अरु १४ वटा कृषि सहकारीहरु पनि साना किसानका सदस्यहरु हुन । अप्ठ्यारो कुरा चाहीँ के भने २८ जना मिलेपछि सहकारी दर्ता हुन्छ । सहकारी जन्माउनु मात्र ठुलो कुरा होईन कि त्यो सहकारी मार्फत सबै कुराको आवश्यकता पुरा गर्नु नै ठुलो कुरा हो । सरकारले पनि कृषि क्षेत्रको हकमा १ सहकारी १ गाउँ विकास समितिमा पु¥याउने निती लिएको छ । साना किसान कृषि सहकारी बनाउनुको अर्थ नेपाल सरकारले नै १ गाउँ विकास समितिमा १ साना किसान संस्था बनाईनुपर्छ भन्ने उदेश्य रहेको छ । हामीले पनि एक गाउँ विकास समिति भित्र १ घर १ सहकारी सदस्य बनाउनुपर्ने कुरा अगाडी सारेका छौँ ।
वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले वचत राख्ने र ऋण दिने काम मात्रै गर्छ । साना किसान कृषि सहकारी संस्थाले वचत राख्न लगाउने र ऋण दिने काम मात्र नभएर सदस्यहरुको विभिन्न आवश्यकताको पुरा गर्ने काम गरिरहेको छ । संस्थाका सदस्यहरुलाई तरकारी सम्बन्धि तालिम दिने तथा किसानहरुले पालेको पशुहरुको बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । साना किसान संघले ३५ जनालाई तरकारी सम्बन्धि, ३५ जनालाई पशु सम्बन्धि तालिम दिई प्रत्येक ३५ वटा साना किसान कृषि सहकारी संस्थामा १–१ जना राख्ने व्यवस्था मिलाएको छ । हाम्रो धादिङमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि कृषिमा लगानी गरिएको छ । साना किसान सहकारी संस्थाले आफ्नो सदस्यहरुको विभिन्न आवश्यकता पुरा गरेको हुनाले वचत तथा ऋण सहकारी संस्था भन्दा साना किसान कृषि सहकारी संस्था बढि प्रभावकारी मानिन्छ ।
वचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई साना किसान कृषि सहकारी संघमा मर्ज गर्न सकिन्छ । १ बर्ष भन्दा अगाडी हामीले महादेववेशीमा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था लाई साना किसान कृषि सहकारी संघमा मर्ज गरिसकेका छौ । तर मानिसहरुमा के कुराको ईगो हुँदो रहेछ भने म यो संस्थाको अध्यक्ष भनेर जुँगाको लडाई चलेको अवस्था भएकाले उनीहरुले मर्ज गर्न मानिरहेका छैनन् । तर यि सहकारी ठुलो सहकारीसँग मर्ज हुनैपर्छ । किनकि कुनैकुनै सहकारी स्थापना भएको ८ बर्ष हुँदा पनि १०० जना सदस्य पनि प¥ुयाउन सकिरहेका छैनन् । प्रत्येक बर्ष सहकारी घाटामा गईरहेको छ । यो अवस्थामा उनीहरुले कसरि सहकारी चलाउन सक्छन् । यो हिसाबले सानातिना सहकारीहरु कि मरेर जान्छन् कि ठुला सहकारी संग मर्ज हुनैपर्छ ।
साना किसान जिल्ला सहकारी संघ धादिङले युनाईटेड मिसन टू धादिङ कलस्टरसंग ९ बर्ष अधि बाट सहकार्य गरि काम गरिरहेको छ । बिभिन्न गाउँ बिकास समितिमा बाख्रा पालन, अर्गानिक खेती, बङ्गुर पालन, कुखुरा पालन, माछा पालन सम्बन्धि तालिम दिईरहेको छ । जस्तै : नैबिसे गाउँ बिकास समितिमा ४५ रोपनि जग्गामा जिल्ला कृषि कार्यालय धादिङ, विपिभन्न एजजिओ, यू एम एन धादिङको सहयोगमा तरकारीको प्लट बनाई तरकारी खेति सुरु गरेका छौ । केवलपुरमा पनि त्यो काम सुरु गर्न लागेका छौ । यू एम एन र कृषि सम्बन्धि काम गर्ने एउटा संस्था एग्रिटेरा दी नेदरल्यान्डसंग मिलेर गत ४ बर्ष अगाडी देखि काम गरिरहेका छौ । साना किसान बनाउने कुरामा नेपाल सरकारको पनि सहयोग छ । एग्रिटेडा दी नेदरल्यान्ड संग पनि अनुरोध गरि ८ वटा गाउँ विकास समितिमा नेदरल्यान्डको सहयोगमा साना किसान कृषि सहकारी संस्था बनाएका छौँ । अहिले हामीले अर्को हेल्भेटास, उर्जा विकास समितिसँग मिलेर बायोब्रिकेट बनाउने काममा अगाडि बढिरहेका छौं । यसलाई हामी कोइला चारकुल पनि भन्दछौं ।
म चाहीँ कुनै पनि सहकारीले धेरै नाफा कमायो भन्दैमा त्यसलाई राम्रो मान्दिन । सहकारीको काम नाफा कमाउने होईन । जुन सदस्यको हरेक समस्याको समाधान गर्न सक्दछ र सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्छ त्यस्तो सहकारी चाहीँ राम्रो हो । सहकारीले सदस्यको हरेक समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ ।
छोटो र गाउँले भाषामा भन्नुपर्दा सहकारी भनेको सबै मन मिल्ने मान्छेहरु मिलेर काम गरौं त्यो काम गर्दा जे फाईदा हुन्छ त्यो सबै मिलेर खाउँ र घाटा हुन्छ भने सबै मिलेर सहुँ भन्ने नै हो ।